Faaksootaaf masakiicha bana. Galmee qajojiiwwani, galmeelee faaksiiti akka umtuu sigargaara. Yoo faaksiin ooftuu softiweerii jiraatee, kana booda galmeelee faaksii gara maxxafamuu.
Faayilii - Masaka - FaaksiiFiladhu
LibreOffice'n qajojiilee faaksii galmeewwani, kan fedhii keetif akka sif toluutti masakiichaan foyyeessuudandeessuu kunneen waliin mul'ata. Masakiichii sadarkaa sadarkaadhaan galma qajojii akka uumtu si gargaara akkasuma steessumootaa, fi saxaxi dirqaloota si laata. Galmeen dusrsa ilaalii faaksii argame akkamitti akka xumurtu siif ibsa.
Qaaqa keessatti galfatootaa fi dirqaloota yeroo barbaadeetti fooyyeessuu dandeessa. Fuuloota hunda ykn fuuloota masakaa maraa dhiisu dandeessa, yeroo kana qindanootni ammaa (ykn durtii) ni hojjatuu jechuudha.
Faaksii Masakaa - Fuula Saxaxaa
Haalata faaksi galmee keeti qindeessa.
Faaksii Masakaa - Maalimoota Hammataman
Maalimoota faaksi maxxanffamu qaban murteessa.
Faaksii Masakaat - Ergaa fi fudhataa
Faaksiichaaf odeeffannoo fudhataa fi ergaa ifteessi.
Faaksii Masakaa - Jaalantoo
Deetaa jalaantoo murteessii.
Faaksii Masakaa - Maqaa fi Iddoo
Maqaa fi iddoo qajojiicha hiika.
Qindaa'innota fuula duraani irraa filataman mul'isuuf qabduu duubaa cuqaasi. Qabduu kana yoo cuqaastee, qindaa'innotni amaa hin foyyeffaman ykn hin haqaman. Duubni kan ka'a ta,uu fuulaa lammaffaa irraa egaleetti.
Masakiichii qindaa'inoota ammaa olkaa'eeti gara fuula itti aanuti darba. Erga fuula dhuumaa irra geessee booda qabduun Itti Aanu hin si'oftu.
Filannoo keetirrtti hundaa'uun masakiichii galmee qajojii uumeeti olkaa'a. Qajojiicha irraatti hundaa'un galmeen harofni maqaa faayilii waliin iddoo hojii keessatti mul'ata."UntitledX".
Title is: Masakaa Fakasii